Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir C/raxmaan C/shakuur Warsame ayaa maqaal dheer ka qoray Isbayeysiga saddex geesoodka ee ka dhex sameysmay dalalka Itoobiya, Eritrea iyo Soomaaliya
Saturday November 17, 2018 - 21:18:03 in Wararka by Mogadishu Times
Maqaalkiisa ayuu si qoto dheer uga hadlay taariikhda fog iyo mida soke ee Itoobiya, is bedelka dhinaca xukunka ah ee ka dhacay iyo saameynta uu gobolka ku yeeshay. Halkan hoose ka akhriso:- Innaga iyo Itoobiya waxaanu nahay laba dal oo deris ah
Maqaalkiisa ayuu si qoto dheer uga hadlay taariikhda fog iyo mida soke ee Itoobiya, is bedelka dhinaca xukunka ah ee ka dhacay iyo saameynta uu gobolka ku yeeshay. Halkan hoose ka akhriso:- Innaga iyo Itoobiya waxaanu nahay laba dal oo deris ah. Loolan siyaasadeed oo dheer ina dhexmaray. Waa dal wayn oo itaal, dhaqaale iyo xiriir dawli ah intaba innaga badan. Waxay kaloo inaga sitaan aqoonta ay inoo leeyihiin.Ma badna inta aan Itoobiya ka naqaan. Inta badan xogteenu waxay ku dhisan tahay waa la yiri iyo cilmi dhagood.
Abiy Ahmed iyo qowmiyadda Oromada ee uu ka soo jeedo waxay ku cusub yihiin hoggaanka talada dalka. Waxay ku jiraan xilligiifurfurnaanta iyo soo-jiidashada qowmiyadaha kale. Xilligii uu Zenawi iyo qowmiyadda Tigreegu talada dalka qabteen waxay maquuniyeen oo awooddii ay lahaayeen wiiqeen Amxaarada oo ahayd qoladii uu Mengistu Haile Mariam ka dhashay. Waxay ku guuleysteen in dhammaan qowmiyadihii kale ay ku abaabulaan Amxaarada, una tusaan in ay yihiin cadawga koowaad ee mudan in Itoobiya laga qabto. Amxaaradii waxay noqdeen Tuke caanbaar lehoo cid walba il xun ku eegto ilaa ay magaca qowmiyaddooda la gabbadaan.
Hoggaamiyaha Eritrea wuxuu guul u arkaa in TPLF oo ay isaga is hayeen talada laga tuuray . Inta badan Jabhadaha hubaysan ee Itoobiya la dagaala Waxaa xarun u ahaa dalkiisa sida OLF, ONLF, Ginbot 7 iyo kuwa kale. Afawerki qayb kama ahayn kacdoonka shacbiga ah ee ay dhallinyarada, sababtoo ah ma jecla kacdoonka caynkaas. Afwerki marna ma doonayo in Itoobiya ay sideedii hore ku soo noqoto taasoo uu u arko in ay halis ku noqoto jiritaanka Eritrea.Dhinaca kale, waxaa culays siyaasadeed ka haystaa gudaha dalkiisa ooku dhowaad 300 oo kun oo askari oo qafaal iyo askariyeyn qasab ah lagu qoray ayaa furumaha dagaalka iyo kaydka ciidanka ahaa.
Dhinaca kale, waa in aan garawsanaa in aysan jirin cid kaaga sama falaysa waxay u aragto in uu yahay taagdaro istiraatiijiyadeed (strategic weakness) uu dalkaadu leeyahay. Waa laga yaabaa in si ku meel gaar ah lagaaga khafiifiyo, laakiin way adag tahay in abid lagaa joojiyo. Mar haddii arrinku sidaas yahay waxaa haboon in aad xalliso sababta keentay mushkiladdaintii aad baryi lahayd hoggaamiye dal kale. Waa in aad soo celiso kalsoonidii iyo is aaminaddii kuna qanciso kuwa talada kaala dhaxayso in in ay dhaqankaas ka waantoobaan. Tan kale waa in meesha laga saaro baahida loo qabo joogitaanka ciidanka Itoobiya oo haatan ammaanka Soomaaliya marti looga yahay. Waa laga yaabaa in taaktikada iyo farsamada isbedasho, laakiin waa hubaal in aysan Istiraatiijiyadu marna isbedelaynin. Ma la yaabayo in aan aragno Abiy oo Muuse Biixi ama madaxda maamul Goboleedyada qaabilaya, sababtoo ah ma jirto culays siyaasadeed uu fal celiskaada kaga baqo ama kaarar gacanta kuugu jira oo fal u dhigma ku samaayn karto. Waxay ka dhigan tahay in aad naxariistiisa magan u tahaya
Maqaalka uu cinwaan uga dhigay "Resurgent ethnic nationalism shaping geopolitics in the horn” ayuu Peter ku doodayaa in ujeedka Abiy Ahmed uu yahay in uu dhiso (Cushitic Alliance) Isbahaysi Kuushitik ah oo ay sal u yihiin Oromada iyo Soomaalida.